Ikamva le-UNWTO Limiliselwe yi-Saudi Arabia ne-Spain: Usuku olutsha loKhenketho lweHlabathi oluManyeneyo luqaliswe kwi-FII
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Ikamva le-UNWTO Limiliselwe yi-Saudi Arabia ne-Spain: Usuku olutsha loKhenketho lweHlabathi oluManyeneyo luqaliswe kwi-FII
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • ISpain Iindaba Eziphambili • komzila Ngoku • I-WTN
Ukubuyiselwa kokhenketho kuya kuthatha ixesha kunye neenzame ezilungelelanisiweyo. Kuya kuthatha intsebenziswano yamazwe ngamazwe kunye nombutho wamazwe ngamazwe oxhotyisiweyo. Namhlanje, iSaudi Arabia kunye neSpain beza etafileni ngesivumelwano esinokubumba ikamva lokhenketho kunye ne-UNWTO.
ISaudi Arabia kunye neSpain bajoyina imikhosi ukuyila kwakhona ukhenketho emva kwe-COVID kubandakanya ne-UNWTO.
HE Ahmed Al Khateeb - UMphathiswa wezoKhenketho, uBukumkani baseSaudi Arabia.
U-HE Maria Reyes Maroto – uMphathiswa wezoShishino, uRhwebo kunye noKhenketho, kuBukumkani baseSpain.
The Inyathelo loTyalo-mali lwexesha elizayo (FII) eSaudi Arabia yenzeka namhlanje kunye neenkokeli zemali eziyi-6,000 eziyayo.
I-FII Institute sisiseko sehlabathi esingenzi nzuzo esinengalo yotyalo-mali kunye ne-ajenda enye: Impembelelo kuBuntu. Ukuzibophelela kwimigaqo ye-ESG, ikhuthaza iingqondo eziqaqambileyo kwaye iguqule iingcamango kwizisombululo zehlabathi langempela kwiindawo ezi-5 ezigxininisekileyo: I-AI kunye neRobhothi, iMfundo, iMpilo, kunye noZinzo.
Okokuqala ngqa, uhambo kunye nokhenketho yayiyenye into ekugxilwe kuyo kwaye yathatha indima enkulu kule Saudi Arabia isingathe inkomfa yehlabathi. Iinkokeli eziphezulu ze-150 kushishino lwezohambo nokhenketho bezizimase, kuquka nabaphathiswa abangaphezulu kwe-10 abahleliyo.
I-UNWTO ilahlekelwe ukuthembeka kunye nokubaluleka ukususela ngo-2018. Ngoxa uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvil ebambe umcimbi wakhe e-Barcelona ngamabomu ngosuku olufanayo kunye nokuthatha inxaxheba okubuthathaka, iinkokeli zaseSaudi Arabia zihlangene ukuze zibumbe ikusasa le-UNWTO.
Isiphumo yaba sisivumelwano ISaudi Arabia kunye neSpain ukujoyina imikhosi ukuyila ngokutsha ukhenketho emva kwe-COVID kuquka ne-UNWTO.
Esi sivumelwano satyikitywa ngu HE Ahmed Al Khateeb yaseSaudi Arabia kunye HE Maria Reyes Maroto eSpeyin. I-UNWTO inekomkhulu layo eMadrid. Esi sivumelwano sikwaphelisa amahemuhemu malunga neSaudi Arabia efuna ukuhambisa ikomkhulu le-UNWTO eRiyadh. I-Saudi Arabia ngoku iqela elinye elilungele ukukhokela ukubumba ikamva lokhenketho lwehlabathi kunye nombutho osemva kwayo - UNWTO.
Ingxelo edityanelweyo yiSaudi Arabia kunye neSpain
1. Sibe nentlanganiso yokusebenza egqwesileyo namhlanje kwimida yeFuture Investment Intiative eRiyadh, apho siye sachonga inani leenkalo apho iSpain kunye neSaudi Arabia zinokudlala indima ephambili ekuvuseleleni icandelo lezokhenketho emva kobhubhane, kuba. ukuze ibe yenye yeentsika zokuvuselela uqoqosho lwehlabathi. Icandelo lezokhenketho lifuna ubunkokeli obuqinileyo kunye nolungelelwaniso ukuhlanganisa oorhulumente kunye namahlakani ecandelo labucala ukuze asebenzisane ngakumbi. Kufuneka sakhe icandelo lokhenketho elizinzileyo, elizinzileyo, neliqukayo nelibonelela ngenkqubela phambili yexesha elide.
2. ISaudi Arabia ine kwaye isaqhubeka nokudlala indima ephambili ekuboneleleni ngolungelelwaniso lwamazwe ngamazwe kweli candelo, iqala ngobongameli bayo be-G20 ngo-2020. UBukumkani bakhe phezu koku ngenani lamanyathelo abalulekileyo aquka i-100 yezigidi zenkxaso-mali kwiHlabathi. IBhanki yeTourism Community Initiative, inkqubo yeeLali eziBalaseleyo, ngokubambisana ne-UNWTO, kwaye ngoku iZiko leHlabathi lezoKhenketho eliZinzileyo. ISaudi Arabia ibisebenza namahlakani ezizwe ngezizwe ukwakha inkqubo ejonge ukuyila ngokutsha ikamva lokhenketho kunye nokujongana nemingeni esisiseko ejongene neshishini.
3. Ngexesha lentlekele ye-COVID, iSpain ibiphambili kwiinzame zamazwe ngamazwe zokubuyisela ukushukumiseka ibe yaba ngumamkeli kwangoko we-EU Digital COVID Certificate. ISpain lilizwe lesibini kwelona lizwe lityelelwa kakhulu kwihlabathi, lifumene iindwendwe zamazwe ngamazwe ezizigidi ezingama-83.7 ngo-2019. Idume ngeendawo zayo kunye neziseko ezingundoqo kunye namaqumrhu ayo okhenketho akumgangatho wehlabathi. ISpain yinkokeli yehlabathi kwezokhenketho, ilungu elisungula i-UNWTO, kwaye ngoku ityalomali kwi-complex entsha eya kuhlala ikomkhulu lombutho.
4. Omabini la mazwe ayavuma ukuqinisa intsebenziswano yawo kwimiba emithathu ephambili yokuphuhlisa ukhenketho: okokuqala, ukukhuthaza ukuzinza, okuya kuba yimfuneko ekuqinisekiseni ukusebenza kwayo kwixesha elizayo njengecandelo lokukhula kunye negalelo layo kuqoqosho lwehlabathi oluchithwayo, kunye nokuqinisa ukubandakanywa koluntu ngaphakathi komkhosi. uluntu. Okwesibini, ukusebenzisana kwinguqu yedijithali, ukwakha iindawo ezihlakaniphile neziqhagamshelweyo, ukwandisa ukuhamba nokutshintshiselana ngolwazi kunye nokuqonda ukukhawulezisa inguqu yecandelo lezokhenketho. Okwesithathu, iSpain kunye neSaudi Arabia ziya kusebenzisana ukukhuthaza nokuphuhlisa uqeqesho lwezibonelelo zabasebenzi ukuqinisa amandla abantu abasebenza kweli candelo, ukusuka kuqeqesho lomsebenzi ukuya kwizifundo zasemva kwesidanga kunye nobungcali.
5. Ukhenketho licandelo elibalulekileyo lehlabathi. Kwaye isivumelwano sanamhlanje siya kuqinisekisa ukuba iinkokeli ezimbini zeli candelo ziya kusebenzisana ngakumbi ukuze kuxhamle bonke abo baxhomekeke kuso.